के असोज २४ मा आउँदैछ ‘छ माया छपक्कै’ ? « Mazzako Online
के असोज २४ मा आउँदैछ ‘छ माया छपक्कै’ ?
आमा सरस्वती मुभिज र रोहित अधिकारी फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को टिमले अझै पनि रिलिज मिति तय गरेको छैन । फिल्मको रिलिज मिति सार्वजनिक नहुँदा यो फिल्म कहिले आउँछ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसैबीच सिनेमाको फर्स्टलुक पोष्टर पनि रिलिज गरिएको छ । पोष्टरमा नायिका केकी अधिकारी, दिपकराज गिरी, जीतु नेपाल र केदार घिमिरे माग्नेबुढालाई स्थान दिईएको छ ।
फिल्मको टिमले भदौ २७ गते रिलिज गर्ने हल्ला समेत फिजाएको थियो । तर, फिल्म दशैंमै आउने चर्चा छ । तर, यो विचमा फिल्म क्षेत्रमा एउटा खबर फैलिएको छ ‘छ माया छपक्कै’लाई असोज २४ गते रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ ।
दशैं लगतै यो फिल्म हलमा लगाउने तयारी गरिएको वुझिएको छ । तर, फिल्मको टिमले आधिकारिक घोषणा केही पनि गरेको छैन । असोज २४ गते फिल्म रिलिज भएको खण्डमा दशैंको टिका सकिएपनि दशैं भने सकिएको हुने छैन ।
असोज १७ मा हिन्दी फिल्म ‘वार’ रिलिज हुन लागेकाले पनि हलमा कम शो पाउने शंका छ माया छपक्कैको टिमलाई छ । दिपेन्द्र लामा निर्देशित यो फिल्ममा दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, केकी अधिकारी, सुपुष्पा भट्ट लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।